Football Khabar » सासुओलोका किपर भन्छन्– ‘रोनाल्डोले हेडिङ गर्न नपाउने गरी फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’
सासुओलोका किपर भन्छन्– ‘रोनाल्डोले हेडिङ गर्न नपाउने गरी फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’
दुई दिनअघि इटालियन सिरी ए लिगमा युभेन्टस र सासुओलोले खेले । युभेन्टसको घरमा भएको सो खेलमा पाहुना टोली सासुओलो ३–१ ले पराजित भयो । सो खेलमा सासुओलो पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । घरेलु टोली युभेन्टसलाई जिताउन ड्यानिाले, आरोन राम्से र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले १–१ गोल गरे ।
सो खेलपछि सासुओलोका गोलकिपर आन्ड्रेया कोन्सिग्लीले युभेन्टसका रोनाल्डोबारे निकै रोचक टिप्पणी गरेका छन् । ३३ वर्षीय इटालियन गोलकिपरले उनले युभेन्टसविरुद्ध आफ्नो टिमको गोल पोस्ट सम्हालेका थिए । खेलमा रोनाल्डो कोन्सिग्लीविरुद्ध हेडिङ बल प्रहार गर्न बक्सभित्र अपत्यारिलो गरी हावामा उडेका थिए । रोनाल्डोले बक्समा अस्वभाविक रूपमा सासुओलोका गोलकिपरसँग ‘एयर ट्याकल’ गर्दै हावामा उडेको भिडियो फुटेज अहिले सामाजिक सन्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।
रोनाल्डोले आफ्नो गोल पोस्टमा आफूभन्दा माथि उफ्रिएपछि कोन्सिग्लीले खेलपछि मिडियामा प्रतिक्रिया दिए । आफू भएभरको बल लगाएर जम्प गरेर हात माथि उठाउँदा पनि रोनाल्डो उफ्रिएजति पुग्न नसकेको कोन्सिग्लीले एक इटालियन टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । उनले त रोनाल्डोको एयर क्षमता देखेर उनको तारिफ मात्रै गरेका छैनन्, रोनाल्डोले हेडिङ गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धै लगाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
रोनाल्डोको जम्पिङबारे कोन्सिग्लीले भनेका छन्, ‘ओ माई गड ! के क्रिस्टियानो मानिस नै हुन् ? उनी उफ्रिन्छन् कि उड्छन् ? म अझै आश्चार्य चकित छु । खेलपछि मैले त्यो फुटेज पटक–पटक हेरिसकें । तर, म अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन कि, त्यसरी जम्प गर्ने क्रिस्टियानो थिए । उनले भुइँबाटै जम्प गरेका थिए ? म अझैसम्म गहिरो सोचमा छु । त्यत्तिबेलै मैले धेरै कुरा सोच्न भ्याइनँ । तर, पछि त्यसको क्लिप बाहिर आयो, मैले हेरें । एकदमै अद्भुत, एकदमै अपत्यारियालो । आकाशमा बिजुली चम्किँदाको झिल्काजस्तो ।’
कोन्सिग्लीले अघि थपेका छन्, ‘उचाइबाट आएको बल क्लियर गर्न म जमिनबाट सबै बल लगाएर उफ्रिएँ । अनि एउटा हात कसेर बललाई हान्न खोज्दै थिएँ । तर, मेरो हातभन्दा माथि त क्रिस्टियानोको टाउको थियो । र, उनी बललाई हेडिङ गरिरहेका थिए । मैले त्यसबेला बलभन्दा पहिला क्रिस्टियानो टाउको देखें । सायद म भुइँबाट उफ्रिएर हात उठाउँदा पनि उनको काँधभन्दा माथि थिइनँ होला ।’
कोन्सिग्लीले ठट्यौली गर्दै अबदेखि रोनाल्डोले खेल मैदानमा हेडिङ गर्न नपाउने गरी फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए । ‘कोही फुटबलर यति माथिसम्म एयर बलका लागि जम्प गर्छ भने यो खतरनाक कुरा हो, यो प्रकृतिका विरुद्ध हुन्छ । गोलकिपरका लागि त यो झनै खतरनाक हुन्छ । (हाँस्दै) मेरो विचारमा क्रिस्टियानोले अबदेखि मैदानमा हेडिङ गर्न नपाउने गरी फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ….. ।’
रोनाल्डोले अग्लो उचाइमा उफ्रिएर हेडिङ गरेको यो नै पहिलोपटक भने होइन । उनले विगतमा पनि यस्ता थुप्रै अपत्यारिला हेडिङ गरेका छन् । विगतमा उनले यस्ता अपत्यारिलो गरी जम्प हानेर सोझै प्रशस्तै गोल नै गरेका छन् । धन्न ! सासुओलोविरुद्ध उनको खतरनाक हेडिङ प्रहारमा गोल भने भएन । गत सिजन सिरी ए लिगमै रोनाल्डोले योभन्दा माथि जम्प हानेर खतरनाक हेडिङ गोल गरेका थिए, जसको चर्चा अहिले पनि हुन्छ । फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हेडिङ गोलको इतिहास बनाएका रोनाल्डोले आफ्नो करिअरमा थुप्रै चर्चित हेडिङ गोलहरू गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २८ पुष २०७७, मंगलवार २१:२९
आजदेखि कोपा इटालियामा अन्तिम १६ का खेल हुँदै
ला लिगामा आज दुई खेल : एथ्लेटिको मड्रिड–सेभिल्ला आजै भिड्ने
मेस्सी ‘दशककै सर्वोत्कृष्ट प्ले मेकर’ खेलाडी घोषित : को कति नम्बरमा ?